Maty Nisy Namono Tao St. Petersburg ilay Mpampianatra Queer Tango · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2014 3:24 GMT
Vakio amin'ny teny polski, русский, Nederlands, Français, Español, English
Sary farany nalefan'i Khomenko tao amin'ny kaonty Vkontakte-ny. 3 Septambra 2014. Vkontakte.
Hita faty tao anatin'ny fiarany ny marainan'ny 7 Septambra i Ekaterina Khomenko, 29 taona, mpampianatra queer tango, nahitàna tataka be mirefy 10 santimetatra teo amin'ny tendany. Mbola nandeha ny maoteran'ny fiara raha nitsipalotra tamin'ny fiarany ny mpanadio lalana iray. Manadihady ny fahafatesany ho toy ny vono olona ankehitriny ny polisy izay nilaza teny am-boalohany fa mety ho namono tena i Khomenko. Tsy nilaza mikasika ny fifandraisana misy amin'i Khomenko sy ny fikambanana LGBT kosa ny vaovao voalohany navoakan'ny gazety tao an-toerana.
Iray tamin'ireo namoaka voalohany mikasika ny nahafatesany ny rain'i Khomenko, Valéry. Maneho hevitra amin'ilay sary farany nalefan'i Ekaterina ao amin'ny kaonty Vkontakte-ny (eo ambony), nilaza izy fa nisy mpitsongodia niantso azy an-telefonina tamin'ny 9 ora maraina tamin'ny 7 Septambra hilaza taminy fa hita faty ny zanany vavy. Araka ny fanehoan-keviny antserasera, ny polisy no liana indrindra tokony hahafantatra raha manana raharaha rongony, olana ara-bola na fironana mankany amin'ny famonoan-tena i Katya.
Roa andro taty aoriana, nandefa ady mamaivay tamin'ny fanehoan-kevitra nataony [eo ambanin'ny sary] ny mpisera Vkontakte iray antsoina hoe Timur Isaev, nilaza izy fa “matetika maty aloha noho ny olona salama [sic] ny olona pelaka.” Namela fanehoan-kevitra 48 hafa tao anatin'ny 48 ora i Isaev, mamerina ny hafatra fankahalana pelaka nataony hoan'ny naman'i Khomenko mbola ao anatin'ny fisaonana.
Nilaza ny Lesbiru.com, vavahady antserasera hoan'ny lesbiana miteny Rosiana fa mpikambana ao amin'ny fikambanana “Gay Hunters (Mpihaza pelaka),” anti-gay Vkontakte i Isaev, izay izarany fitaovana fankahalana pelaka amin'ireo mpikambana 122 hafa ao amin'ny vondrona. Mavitrika ao amin'ny Twitter ihany koa i Isaev, izay izarany votoaty anti-gay betsaka sy mankasitraka ny fanakambanana an'i Krimea amin'i Rosia.
Araka ny filazan'ny tranokalam-baovao guerilla Contraband, matoky ny fikambanan'ny LGBT ao Saint-Petersburg fa nisy ifandraisany tamin'ny fahafatesany ny asan'i Khomenko amin'ny maha-mpampianatra “tango”-n'ny pelaka azy. Nanangana vondrona manokana tao amin'ny Vkontakte ny mpiara-miasa sy ny naman'i Khomenko, Angelina Tishina, mba hanao fanangonam-bola hoan'i Valery Khomenko, angamba tokoa mba hanampiana ny lany amin'ny fandevenanan an'i Katya, izay notontosaina omaly teo amin'ny manodidina an'i Moskoa.
Miatrika fanamby araka ny lalàna sy ara-piarahamonina ny fikambanana LGBT ao Rosia. Na dia nofafana tamin'ny fomba ofisialy tao anatin'ny lisitry ny areti-tsaina Rosiana tamin'ny taona 1999 aza ny fahapelahana, sanganehana ireo mpikatroka ny zon'Olombelona nahita fa nandany fandraràna maromaro amin'ilay lazaina fa “propagandin'ny pelaka” ireo mpanao lalàna federaly taona vitsy lasa izay. Talohan'ny firotsahan'ny miaramilan'i Moskoa an-tsehatra tao Okraina Atsinanana, dia angamba olana ara-dokambarotr'i Kremlin eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny famoretana ny zon'ny pelaka ao Rosia.
Vaovao farany: Nitatitra ny tranokalam-baovao Spbdnevnik.ru fa efa saofera tamin'ny raharaha fiarahana mandeha amin'ny fiara iray antsoina hoe “Rainbow Taxi,” tao St. Petersburg i Ekaterina Khomenko, fanaovan-draharaha tahaka ny an'ny Uber izay natao hoan'ny fikambanana LGBT, manome fitsangatsangana milamina hoan'ny toeram-pisotroana sy ireo klioban'ny mpinamana pelaka ao an-tanàna. Nilaza ny tolotra taxi fa tsy niasa toy ny saofera intsony i Khomenko nandritra ny roa taona mahery, saingy miahiahy ireo namany fa mety namaly antso “Rainbow” iray izy nandritra ny alina namonoana azy